Ny nosy Procida dia nantsoina hoe renivohitry ny kolontsaina any Italia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny nosy Procida dia nantsoina hoe renivohitry ny kolontsaina any Italia
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao farany Italia • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Tetikasa ara-kolontsaina efatra amby efapolo, fandaharana mandritra ny 330 andro, mpanakanto 240, sanganasa 40 tany am-boalohany ary habaka 8 voaverina indray: ireto no isan'ny taona mampanantena fa tsy ho hadinoina ho an'ny tanànan'ny Campania.
Ny Nosy Procida any Italia, faritany iray amin'ny faritra Campania (renivohitra Naples) dia miomana haka ny batony avy any Parma izay, noho ny areti-mifindra, dia hitazona ny satro-boninahitry ny Renivohi-kolontsain'ny Italiana mandritra ny taona 2021 rehetra.
"Tsy mitokana ny kolontsaina": io no anaran'ny dosie izay avy amin'ny rano lalina an'ny Tyrrhenian (ranomasina Tirreno) no nandresen'i Procida kely Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania sy Volterra, ireo sivy farany famaranana tamin'ny filatsahana ny anaram-boninahitra Italiana Renivohitry ny Kolontsaina 2022. Sambany teo amin'ny tantaran'ilay hetsika no nahazoana ny loka iray tamina tanàna kely (mponina 10 mahery) fa tsy ho an'ny faritany na renivohi-paritra.
Ho fanampin'izay, hoy ny fanazavan'ny filohan'ny mpitsara Stefano Baia Curioni, Procida dia tsy mandresy amin'ny hatsarany na amin'ny tantarany, fa noho ny kalitaon'ny tetikasa natolotra. “Ny tanin'ny nosy dia toerana fikarohana, fanandramana ary fahalalana, maodelin'ny kolontsaina ary fanoharana ho an'ny olona ankehitriny.
Ny herin'ny fisainana sy ny fahitana ny fahitana dia mampiseho antsika Procida ho renivola fakan-tahaka amin'ny fifandraisan'ny fifandraisana, ny fomba fampidirana ary ny fitandremana ny lova ara-kolontsaina sy voajanahary ", dia mamaky ny dosie:" Procida no nosy izay tsy nosy fa laboratoara. kolontsain'ny fahasambarana ara-tsosialy “.
Ny programa Procida 2022
Ao amin'ny nosy, ny kolontsaina dia tsy faran'ny tenany ihany, fa mizara fizarana dimy misokatra amin'ny zava-misy miova: Procida mamorona (fampirantiana, fandefasana horonantsary, fampisehoana ary sangan'asa manokana momba ny tranokala), manome aingam-panahy i Procida, izay nanjary motera ilay nosy. ny sary an-tsaina sy ny fahaiza-mamorona, tafiditra ao amin'ny Procida, izay nanjary faritry ny fifandraisana eo amin'ny olona sy ny fiaraha-monina ny zava-kanto, manavao ny Procida, ka ny lova ara-kolontsaina ao amin'ny nosy dia averina jerena raha ampitahaina amin'ireo mpanavao eo an-toerana sy iraisam-pirenena, ary mianatra ny Procida, mitady fomba fampianarana vaovao manentana.
"Ny tetikasa ara-kolontsaina dia misy singa manintona sy manana kalitao tena tsara", vakio ny fanentanana nataon'ny mpitsara novakin'ny minisitry ny lova ara-kolontsaina sy ny hetsika ary ny fizahan-tany Dario Franceschini nandritra ny fanambarana vao haingana: "Ny tontolon'ny fanohanan'ny vahoaka sy ny isam-paritra ary ny tsy miankina dia voalamina tsara, miavaka ny refin-patrimonial sy ny endrika an'io toerana io, ny refin'ny laboratoara, izay misy lafin-javatra ara-tsosialy sy fanaparitahana ara-teknolojia, dia natokana ho an'ireo nosy Tyrrhenian, fa mifandraika amin'ny zava-misy rehetra amin'ireo nosy Mediterane kely.
Ny tetikasa dia afaka mamaritra, noho ny fitambaran'ireto lafin-javatra ireto, ny fijanonana tsy mitombina ao amin'ny faritany ary maneho ny maodely ho an'ny fizotran'ny fampandrosoana maharitra mifototra amin'ny kolontsain'ny nosy sy ny zava-misy amoron-tsiraka ao amin'ny firenena.
Ilay tetik'asa koa dia afaka mamindra hafatra poetika, fahitana kolontsaina, izay mipaka hatrany amin'ny zava-misy kely eto amin'ny nosy ho faniriana ho antsika rehetra, hatrany amin'ny tanàna, amin'ireo volana miandry antsika ".
Ny niandohan'ny anaran'ny nosy dia very eo amin'ny zava-misy sy ny angano.
Anisan'ireo hipotesa manome sosokevitra be indrindra ilay iray izay nalaina ny anarana Procida avy amin'ny teny grika hoe "prochetai" midika hoe: mandainga; ho an'ny morphology ao amin'ny nosy. Ny sasany kosa mbola mahazo ny anarana avy amin'ny mpitsabo mpanampy an'i Aeneas antsoina hoe Procida, nalevina tao.
Raha ny fijoroana vavolombelona azo antoka indrindra, ny vaovao voalohany momba an'i Procida dia nanomboka tamin'ny taonjato fahavalo al.f.i. rehefa tonga avy tany amin'ny nosy Eubea ny Calcidese (kaomina grika ao amin'ny faritra afovoan'i Gresy afovoany) dia tonga tany niaraka tamin'ny entany ara-kolontsaina, teo amin'ny sehatry ny kanto sy kolontsaina.
Avy eo dia anjaran'ny Romana no nisafidy ny tanibe fa tsy ny nosy Phlegrean (faritra volkanikan'i Naples) ho toerana fialantsasatra, satria ny volkanikan'izy ireo dia tsy nanolo-tena ho amin'ny kanto manorina ny maritrano romanina. I Capri ihany, noho ireo vatolampy vatosokay, no nanana ny voninahitra ho lasa seza amperora.
Nandritra ny voalohan'ny vanim-potoana antenatenany, ny piraty Saracen nanafika ny mponina matetika no nikapoka ny nosy. Anisan'ireo bemidina mahery vaika indrindra ny nataon'ny corsairs silamo notarihin'i Barabarossa.
Ary ny angano an'i San Michele Arcangelo, izay lasa mpiaro ny nosy taty aoriana, dia mifandray amin'ny iray amin'ireo bemidina Saracen maro.
Taorian'ny fanafihana Saracen, ny morontsirak'ilay nosy dia feno tilikambo fiambenana ary ny trano ambanivohitra mahazatra niparitaka tany afovoan'ilay nosy ary ny tranon'ny mpanjono amoron-tsiraka dia nilaozana nankany amin'ny morontsiraka Terra Murata azo antoka (nantsoina taloha hoe Terra Casata hatrizay. Ny tranon'ny Procidani dia nivory mba hiaro tena kokoa amin'ny fanafihana Saracen) izay, miaraka amin'ny haavony 91 m, no hany toerana azo fiarovan-tena ao amin'ilay nosy.
Ny toekarena eo an-toerana dia niova avy amin'ny ranomasina ka hatrany ambanivohitra noho ny filàna fiarovana. Nandritra ny andro toy izao dia nankany amin'ny saha akaiky ny mponin'ny Procida hiverina amin'ny filentehan'ny masoandro na amin'ny feon'ny lakolosy fanairana.
Tamin'ny faramparan'ny Moyen Âge, Procida dia nanana tompo feudal manokana: Giovanni da Procida tamin'ny 1210 ka hatramin'ny 1258, ny Cossa 1339-1529 ary ny d'Avalos tamin'ny 1530 ka hatramin'ny 1729, narahin'ny Bourbons.
Ny ranon'i Procida koa no niseho tamin'ny volana jolay 1552, ny dia an-dranomasina nandritra ny fotoana nisamboran'ny omtomaniana galera fito avy amin'ny ekipa Neapolitanana notarihin'i Andrea Doria.
Ny nosy dia nampita ny satro-boninahitra Neapolitan tamin'ny 1644, dia nalain'ny anglisy anglisy intelo: tamin'ny 1799, nandritra ny Repoblika Parthenopeana; tamin'ny 1806 ka hatramin'ny 1809 tamin'ny vanim-potoana frantsay nanohitra an'i Giuseppe Bonaparte sy G. Murat ary tamin'ny 1813 nandritra ny ady fanoherana Napoleonika.
Ny tantaran'ny Procida taty aoriana dia tsy manaraka làlana manokana iray, fa mifamatotra amin'ny zava-nitranga tao Naples.
Ny nosy Procida-Facts-
Procida, nosy any amin'ny Ranomasina Tyrrhenian, dia eo am-baravaran'ny Helodrano Naples, eo anelanelan'ny Ischia (andrefana) sy Capo Miseno (atsinanana).
Miaraka amin'ny 4 kilometatra toradroa ny velarany, izy no kely indrindra amin'ireo rahavavy ischia sy Capri, nefa manana mponina manodidina ny 11,000 (antsoina hoe Procidani).
Eo andrefan'ny Procida ary mifandray amin'ilay farany amin'ny tetezana iray, manatrika an'i Ischia, mijoro ny nosy Vivara tsy misy mponina, rakotra tanteraka ny fikosohan'i Mediterane.
Avy amin'ny volkano i Procida, ary ny dian'ireo vava volkano taloha dia mbola azo fantarina amin'ireo lohasaha volan-tratra mahazatra (loharanom-pahalalana miresaka 5 na 7); ny tany dia misy tuffs mavo mavo sy ravina volondavenona fotsy eo amboniny.
Tonga hatrany amin'ny haavo 91 metatra farany ambony izy ary noho izany somary fisaka kokoa; fa ny faritra be mponina misy trano polychrome, ny zava-maniry manankarena izay mifangaro ao ny maritrano mediteraneana iray tampoka, ny ranomasina madio sy mamirapiratra, ary ireo vatolampy amoron-dranomasina tsara tarehy, dia miteraka fahitana any amin'ny firavaka tsy fahita firy, ary mahatonga azy io ho toerana fizahan-tany malaza.
Mba hankafizany ny hatsarany, hankafizanao ireo solomaso niampita ho zavakanto, haisoratra, ireo sarimihetsika marobe voatifitra teo, tsy maintsy mirenireny eny amin'ireo arabe tery, mamaky ireo lalamby.
Ny penina dia tsy afaka mamaritra ny fizarana miavaka aseho ho an'ireo izay tonga eo amin'ilay nosy ihany, saingy afaka mamelona indray ireo hetsika ara-tantara, ara-politika, ara-piangonana taloha.